Tuesday December 17, 2019 - 07:15:46 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Max'med Bin Cabdi Raxmaan Ala Thaani oo ah wasiirka arrimaha dibadda Qadar ayaa caddeymo uu siiyay telefeshinka Al Jaziira ku sheegay in wax xoogaa horumar ah laga sameeyay wadahadallada balse wuxuu muujiyay in wadahadalladu aysan gaarsiisnayn heer laga heshiin karo khilaafka jira.
Dhinaca kale Donald Trump oo ah madaxweynaha Mareykanka ayaa dhinacyada is khilaafsan ee Dawaaqiidda Khaliijka ku cadaadinaya in ay heshiis ka gaaraan colaadda udhaxaysa, Trump oo khadka taleefanka kula xiriiray Amiirka Qadar ayaa ugu baaqay in uu heshiis lagalo Sacuudiga.
Warsaxaafadeed kasoo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in Trump uu hoggaamiyaha Qadar ka dalbaday kamira dhalinta wadahadallada kala dhaxeeya dowladda Sacuudiga.
Dowladaha Khaliijka oo garab iyo gaashaan Mareykanka kusiiya ladagaallanka Muslimiinta khilaafkooda sii sedax sana jirsanaya wuxuu saameyn xun ku reebay masaalixdii Mareykanku uu ku qabay dowladahan Hodonka ku ah shidaalka iyo Dahabka.
Dalka yar ee Qadar waxaa kuyaal saldhigga ugu weyn ee Mareykanku ku leeyahay meel ka baxsan qaaradda America, saldhiggan oo lagu magacaabo Alcudeyd waxaa dhismaha qarashka ku baxay oo boqolaal Bilyan oo dollar ah bixisay dowladda Qadar si ay u raalli geliso xukuumadda Washington.